.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဆိုတေး Songs Collection
ဆိုတေးရဲ့သီချင်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဆိုတေး Songs Collection လုပ်ပြီး
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မီးအိမ်ရှင် Album ထဲက သီချင်းတွေရော နောက်ထပ်သူဆိုထားတာတွေရောပါ
အားလုံးပေါင်း အပုဒ် ၂၀ ကို အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ဒေါင်းလို့လည်း ရပါပြီ...။
1 အဝေးရောက်ချစ်သူ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
2 သူငယ်ချင်း အချစ် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
3 အမှတ်တရနေ့ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
4 နင်လိမ်လည်းငါချစ်တယ် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
5 မြတ်နိုးခွင့်လေးပေးပါ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
6 သစ္စာ ဆိုတေး ၊ Bunny Phyo Click Here !! 2.00 MB
7 အိမ်ဂျယ် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
8 ရွှေအိပ်မက် ( ငါ့အနား ) ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
9 ဒီကမ္ဘာမှာ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
10 နင်ပျော်မယ်ဆို ဆိုတေး ၊ Demo Jacktoo Click Here !! 2.00 MB
11 မမသီရိ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
12 ဖက်တီးမ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
13 အဝေးရောက်ချစ်သူ ဆိုတေး ၊ မို့မို့လွင် Click Here !! 2.00 MB
14 တိတ်တိတ်လေးပါပဲ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
15 ဟုတ်လို့လား ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
16 Telephone ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
17 မင်းထက်ချစ်တာငါ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
18 မီးအိမ်ရှင် ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
19 ဘယ်သူရှိမလဲ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
19 မုန်းမေ့မရလို့ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
20 ရောင်စုံမြို့လေး ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB